အိုင်တီလောကမှာ ဒါမျိုးလေးတွေ ရှောင်ပေးပါ 8/29/2008 12:42:47 AM
ဒီအချိန်မှာ လေးစားမိတဲ့ လူငယ် ကဗျာဆရာမ တစ်ယောက်ဆီကနေ Group ဖွဲ့ပြီး ပို့လိုက်တဲ့ အီးမေးလ်လေး တစ်စောင် ရောက်လာတယ်။ ဖွင့်ဖတ်မိတော့ “ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ ဒီဝဘ်ဆိုက်လေးကို သွားဖတ် ကြည့်လိုက်ကြပါလား... အကျိုး မယုတ် စေရပါဘူး...း)” ဆိုတဲ့ အညွှန်း နဲ့အတူ ၀ဘ်ဆိုက် Link လေးတစ်ခု ပါလာတယ်။ အမြဲတမ်းလည်း သူက သူ့ကဗျာလေးတွေ ရေးပြီးရင် သူ့ရဲ့ Blog ကို link ပို့နေကြဆိုတော့ ဘာလဲမသိဘူးဆိုပြီး သွားဖတ်လိုက်မိတယ်။
အဲဒီ ၀ဘ်ဆိုက်မှာ “Who is your one and only?” ဆိုပြီး ဘိုလိုတွေ ရေးထားတဲ့ စာပိုက်လေးကို စတွေ့တယ်။ အင်္ဂလိပ်လို စာဖတ်ပျင်းတဲ့ ကျွန်တော် အမြန်ဖတ်ပြီး သဘောပေါက်လိုက်တာက ကိုယ်ချစ်သူနဲ့ ဖူးစာ ဆုံမဆုံ တွက်တဲ့ဟာလေးပဲ ဆိုပြီး…။
၀ဘ်ဆိုက်ပေါ်မှာက ကိုယ်နာမည်ထည့်ဖို့ Text Box တစ်ခုနဲ့ ကောင်မလေး နာမည်ထည့်ဖို့ Text Box သုံးခု တွေ့ပါတယ်။ ဘယ်လို လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့ လမ်းညွှန် အင်္ဂလိပ်စာတောင် အသေအခြာမဖတ်မိပါဘူး၊ သာမာန် အပျော်တစ်ခုခု ပဲ ဆိုပြီး ကျွန်တော်နာမည်နဲ့ ကျွန်တော် ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်မလေး နာမည် တစ်ခုကို ရိုက်ထည့်လိုက်မိတယ်၊ Calculate ကိုလည်း နှိပ်ရော ကောင်မလေး သုံးယောက်မဟုတ်လို့ ထပ်ရိုက်ပါဆိုပြီး ပေါ်လာတယ်။
ကျွန်တော်ကလည်း အပျော်စမ်းတာဆိုပေမယ့် တခြားကောင်မလေး နာမည်တွေ မထည့်ချင်လို့ ကိုယ်ကြိုက်နေတဲ့သူရဲ့ နာမည်လေးကိုပဲ အဖျားဆွတ်ပြီး ခေါ်တာလေးရယ်၊ အိမ်နာမည်လေးရယ် ထပ်ထည့်လိုက်တယ်။
တကယ် အပေါ်ကစာအတိုင်းဆိုရင်တော့ ကိုယ်နဲ့ ဖူးစာဆုံချင်တဲ့ ကောင်မလေး သုံးယောက် နာမည်ထည့်ပေါ့။ အဲဒီအထဲက ဘယ်သူလဲဆိုတာ တွက်ပေးမယ်ပေါ့။
ကျွန်တော်ကတော့ အလွဲမခံနိုင်လို့ တစ်ယောက်ထဲကိုပဲ နာမည်သုံးခု ထည့်လိုက်တယ်။ နောက်တစ်ကြိမ် Calculate လည်း နှိပ်ရော ကိုယ်အလိမ်ခံလိုက်ရပြီဆိုတာ သေခြာသွားတယ်။
နောက်တစ်မျက်နှာမှာ ပေါ်လာတာက ဘယ်သူလည်းဆိုတဲ့ ပျော်ရွှင်စရာ အဖြေတစ်ခုမဟုတ်ပဲ “Ooopss… you have been fooled” “မင်းတော့ အရူးလုပ်ခံလိုက်ရပြီ… ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ အခု မင်းရဲ့ လျို့ဝှက်ချက်တွေကို ….@gmail.com ကို ပို့လိုက်ပြီ” ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်စာတမ်းလေးပါပဲ။
အီးမေးလ်လိပ်စာက gmail နဲ့ မြန်မာ တစ်ယောက်ဆိုတာ သိသာစေပါတယ်။
ကျွန်တော် အရမ်းကို စိတ်ညစ်သွားတယ်။ “စိတ်ညစ်လို့ ကမ်းပါး သွားထိုင်ပါတယ်၊ သပွတ်အူ မျောလာတာနဲ့ ကြုံ” ဆိုသလိုမျိုးပေါ့။ စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ ချက်ခြင်းပဲ အဲဒီ ကဗျာဆရာမလေးဆီကို ဂျီတော့လ်ကနေ လှမ်းပြောမိတယ်၊ မင့်ကို ယုံမိလို့ မှားသွားတယ်လို့။ နောက်ကို အဲဒါမျိုးတွေ ငါ့ကို မပို့ပါနဲ့လို့။
သူကလည်း ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး အပျော်သဘောနဲ့ ပို့လိုက်တာပါတဲ့၊ ဘယ်သူမှ အမှန်မထည့်လောက်ဘူး ထင်လို့ပါတဲ့။ ကျွန်မဆို ဟောလိဝုဒ်က မင်းသားနာမည်တွေ ထည့်လိုက်တာပဲတဲ့။ ကဲ… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်က ဘယ်လိုခံစားရမှန်း မသိတော့ဘူး။ သူပျော်ဖို့လား ကျွန်တော်ပျော်ဖို့လားလည်း မသိတော့ဘူး။
ဆက်ပြောမိရာက အဲဒီဝဘ်ဆိုက်ကို လုပ်တာ ဘယ်သူလဲဆိုတော့ မြန်မာ blogger ဆရာဝန်လေး တစ်ယောက်ဆိုတာ သိလိုက်ရပြန်တယ်။ ကျွန်တော် စိတ်တွေ အ၀ိစိကို ၀ုန်းကနဲ ထိုးကျသွားတယ်။ လူနာတွေက သူတို့ လျို့ဝှက်ချက်တွေနဲ့ လာတိုင်ပင်ရင်တောင် သမားကောင်း တစ်ဦးအနေနဲ့ ထိန်းသိမ်းထားရမယ့် သူတစ်ဦးက အခုလို သူများ လျို့ဝှက်ချက်တွေ ကို အတင်း ယူမယ်လို့ သိလိုက်ရတော့…။
ကျွန်တော် ခံစားချက် ပြင်းသွားမှန်းသိတော့ ကဗျာဆရာမလေးလဲ စိတ်တွေညစ်။ သူက Group Mail ပို့လိုက်တာဆိုတော့ ဘယ်သူတွေ ဘာတွေ ဖြစ်ကြဦးမယ် မသိတော့၊ သူက ချက်ခြင်းတောင်းပန်ပြီး အားလုံးကိုလည်း ဆက်မဖွင့်ကြည့်ကြဖို့ စာတွေ ထပ်ပို့လိုက်တယ်။ (လူကြီးလူငယ် ဒီနေရာကွာတာလား မသိဘူး၊ ချင်းခြင်းဝန်ခံပြီး တောင်းပန်ဖို့ ၀န်မလေးတာ)။ ကျွန်တော်ကတော့ ဒီလို လုပ်ရပ်မျိုး မဖြစ်စေချင်လို့ Blog ရေးတင်ဖို့ စဉ်းစားမိတယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ ဒေါသနဲ့ ၀ုန်းဒိုင်းလည်း မဖြစ်ချင်၊ အမှားလည်း မပါချင်တော့ စိတ်ကိုငြိမ်အောင်ထားပြီး သေသေခြာခြာ အဲဒီဆိုက်ကို ပြန်ကြည့်မိမှ၊ အဲဒီ ဆရာဝန်လေး ကိုယ်တိုင် အကြံအစီတစ်ခုခုနဲ့ စနစ်တကျ ကြံစီထားတာ မဟုတ်ပဲ၊ ၀ဘ်ဆိုက်ကိုက အဲလိုမျိုး တစ်ဘက်သားကို အရူးလုပ်ဖို့ စနစ်တကျ လုပ်ပေးထားမှန်း သိလိုက်ရတယ်။
ကိုယ်ရဲ့ နာမည်နဲ့ အီးမေးလ်တစ်ခု ရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ရင် သူက အဲလို Web Address တစ်ခု အလိုလို Create လုပ်ပေးတယ်၊ အဲဒီ Link လေးကို တစ်ခြားသူတွေဆီပို့ပေါ့။ ဘယ်သူတွေက ကျွန်တော်လို အရူး လုပ်ခံကြရမလဲဆိုတာ ကိုယ်အီးမေးလ်ကနေ စောင့်ကြည့်နေပေါ့။ သူတို့ရဲ့ နာမည်တွေနဲ့ သူတို့ စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ သူတို့ ချစ်သူတွေ ဘယ်သူတွေဆိုတာ ကိုယ်အီးမေးလ်ကို ပို့ပေးလိမ့်မယ်၊ စောင့်ဖတ်နေယုံပေါ့။
ကဲ …. ဘယ်သူတွေ ပျော်ရလဲတော့ မသိပါဘူး။ ကျွန်တော်တော့ တော်တော် စိတ်ပျက်သွားပါတယ်။ ဟို ကဗျာဆရာမလေးရဲ့ ပြောပြချက်အရ အဲဒီဆရာဝန်လေးဟာလည်း စိတ်သဘောထား ကောင်းတဲ့သူတစ်ယောက်ပါတဲ့။ သူလည်း အမှတ်တမဲ့ အပျော်သဘောလုပ်လိုက်တာပါတဲ့။ ဟုတ်မှာပါ။ သူ့ရဲ့ အီးမေးလ် ..shwe..@gmail.com ကို အမှန်ထည့်ထားကတည်းက သူတကယ်မသိလို့ ဆိုတာ သိသာပါတယ်။
ယုတ်မာမယ့်သူဆို အဲဒီနေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့ တရားဝင် အီးမေးလ်ကို ဘယ်ထည့်မလဲ။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်တော်တော် ငြိမ်သွားပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဒါမျိုးလေးတွေ အိုင်တီချစ်သူတွေကြား မဖြစ်စေဖို့နဲ့ အိုင်တီမောင်မောင် ပရိဿပ်တွေ အိုင်တီမောင်မောင်လို့ အညာခံထိပြီး အရူးလုပ်မခံရစေဖို့ ရေးသင့်တယ် ထင်လို့ပါ ….. ။
[အီးမေးလ်တွေနဲ့ တကူးတက ပြန်တောင်းပန်တဲ့ ညီမ ကဗျာဆရာမလေး၊ ညီငယ် ဘလော့ဂါ ဆရာဝန်လေးနဲ့ အတူ အိုင်တီချစ်သူတွေ အပစ်ကင်းကင်း ပျော်နိုင်ပါစေ ဆန္ဒပြုရင်း …..website လိပ်စာတော့ ထည့်မပေးတော့ဘူး၊ မဟုတ်တာတွေ စမ်းနေကြမှာစိုးလို့။ ]
GTalk Boomber နဲ့ grouping message တွေ ပို့ရအောင် 6/29/2008 9:08:06 PM
အိုင်တီလောက စိတ်ဝင်စားစရာအဖြစ် ဘာရေးရမလဲ စဉ်းစားရခက်လို့ ကိုယ်ဟာကိုယ်ပဲ ဆော့ဖ်ဝဲလေးတစ်ခု ရေးပြီး သတင်းလုပ်လိုက်တော့တယ်။ နာမည်လေးကတော့ GTalk Boomber ပေါ့။ အဓိကက ကိုယ်မိတ်ဆွေ GTalk Friend တွေအားလုံးကို Message ပို့ချင်တဲ့အခါ အဆင်ပြေအောင်လို့ပါ။ သူငယ်ချင်း နည်းတဲ့သူ အတွက် သိပ်မလိုအပ်ပေမယ့် သူငယ်ချင်းတွေ ရာထောင်ချီနေရင်တော့ အတော် ဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ အိုင်တီမောင်မောင်ဆို ဖိတ်ထားတဲ မိတ်ဆွေပေါင်း ၁၀၀၀ နီးပါးရှိတာဆိုတော့….။
ကဲ အဲဒီမိတ်ဆွေတွေ အများကြီးကို Gtalk နဲ့ message ပို့ချင်ရင် တော်တော် ဒုက္ခရောက်တယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ Gtalk မှာ Caption Message ရေးထားတော့လည်း ကိုယ်လည်း Online, သူလည်း Online ဖြစ်မှ ဖတ်လို့ရမှာ။ နောက် Gmail နဲ့ Group ဖွဲ့ပို့မယ်ဆိုတော့လည်း မေးလ်ဆိုတာ သိတဲ့အတိုင်း Click တစ်ချက်နှိပ်ပြီး ဖွင့်ဖတ်မှ ဖတ်ဖြစ်တာလေ။ Gtalk message ကတော့ သူ online ဖြစ်မနေလည်း offline message အဖြစ် ပို့ထားနိုင်တော့ အချိန်မရွေး သူ Online ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ “တုံ” ဆိုပြီး မဖြစ်မနေ ဖတ်မိစေတာပေါ့။
သတင်းတွေ အလျင်အမြန် ဖြန့်ဖို့ တောင်းဆိုနေတဲ့ ခေတ်ကြီးမှာ ကျွန်တော်တို့ GTalk မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကို အချိန်နဲ့ တပြေးညီ သတင်းတွေ ဖြန်ဖို့ GTalk Boomber ဆိုတဲ့ ဆော့ဖ်ဝဲလေးကို ရေးဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာပါ။ တကယ်ရေးမယ်စဉ်းစားတော့ Google ကြီးရဲ့ Gtalk ကို ဘယ်လို ဆက်သွယ်ပြီး ရေးရမှန်းမသိဘူး။ တစ်ရက် Alpha က ကိုရဲမြတ်သူ၊ MIT က ကိုဇော်မိုးတို့နဲ့ မန္တလေးကျုံးရှေ့ Café City မှာ ထိုင်လို့ စကားပြောဖြစ်တော့ ကိုရဲမြတ်သူကြီးက အဲဒါ ဟိုလိုလုပ်လေ၊ ဒီလိုလုပ်လေနဲ့ စဖွတယ်။ သူက အဲလိုပဲ အမြဲတမ်း စစ ဖွလေ့ရှိတယ်။ ကိုဇော်မိုးကြီးကတော့ Google က Jabber ကို သုံးတာ Jabber IM ရေးတာတွေ လေ့လာကြည့်ဖို့ အကြံဥာဏ်ပေးတယ်။
အိုင်တီမောင်မောင်ကလည်း ပရိုဂရမ်မင်းမှာ တစ်ဘက်ကမ်းခတ်တော့ Jabber ဆိုတာ ဘာမှန်းကိုမသိတာ။ ကိုဇော်မိုး ပြောမှ ကြားဖူးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် သိတဲ့အတိုင်း Google ကြီးရှိတော့ သူကိုပဲ မေးဖြစ် လေ့လာဖြစ်တော့တာပေါ့။ အဲဒါရဲ့ အကျိုးဆက်က အခု Gtalk Boomber ကို ဖွဖြစ်တော့တာပေါ့။ ကျွန်တော် ဘယ်လိုစဉ်းစားတယ် ရေးဖြစ်တယ်၊ ဆိုတာလေးလည်း အသေးစိတ် source code နဲ့တကွ ရေးဖို့တော့ စီစဉ်နေတယ်။ ဘာမှတော့ သိပ်မစမ်းပါဘူး။ သုံးထားတာက Microsoft visual studio 2005 IDE, .NET frame work က 2.0, နည်းပညာက TCPClient ကို သုံးပြီး Google ကို သူ သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ HostName နဲ့ Port ကနေ XMPP Jabber code xml တွေ လှမ်းပို့ Google ကလည်း ပြန်ပို့နဲ့ Gtalk server ကို လှမ်းသုံးခွင့်ပြုလိုတဲ့ သဘောပါပဲ။
ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ဆော့ဖ်ဝဲက ပြည့်ပြည့်စုံစုံတော့ မပြီးသေးဘူး။ ဒီဇိုင်းလှလှလေး လုပ်ချင်သေးတယ်။ အဲဒါကြောင့် ဒီဇိုင်းပညာရှင် ညီလေး ညီလင်းဆက်ကို (http://nyilynnseck.blogspot.com/ ) လည်း အကူအညီ တောင်းထားတယ်။ နောက်ပြီး ကိုယ့်ကို နည်းပညာအရရော ခင်မင်မှုအရပါ ဘက်စုံ အကူအညီ ပေးကြတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေဖြစ်တဲ့ AAT Business centre (ကျွန်တော် programming သင်တန်းတွေနဲ့ software house လုပ်ခဲ့တဲ့ကုမ္ပဏီပါ)၊ ALPHA, iNET, MIT ကုမ္ပဏီ ကြော်ငြာတွေလည်း RSS Feeder နဲ့ ထည့်ဖို့ စဉ်စားထားတာ အခုထိတော့ မလုပ်ရသေးဘူး။ စကားတော့ ကျွံပြီးသွားပြီ။ ဒါပေမယ့်လည်း ဖြန့်ချင်နေတာမို့ Gtalk Boomber Beta Version အဖြစ် ဖြန်လိုက်ရတာ။ မွေးနေ့ အထိမ်းအမှတ်ပေါ့ ဒီ ဇူလိုင် ၂ ရက်နေ့ဆို ကျွန်တော် အသက် ၃၄ နှစ်ပြည့်သွားပြီလေ။
Gtalk Boomber beta version ကို www.itmgmg.com/zmdata/gtalkboomber.exe ကနေ ဆွဲချပြီး သုံးလို့ရပါတယ်။ သူကို သုံးဖို့ .NET Frame Work 2.0 ရှိဖို့တော့ လိုတယ်။ Vista သုံးတဲ့သူတွေကတော့ စက်ထဲမှာ ရှိပြီးဖြစ်နေလိမ့်မယ် XP သမားတွေကတော့ run လို့မရရင် Internet ကနေ ဆွဲချပြီး install လုပ်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
ဒီနေရာမှ တစ်ခု ပြောချင်တာက GTalk Boomber ဟာ Beta testing အဆင့်မှာပဲ ရှိပါသေးတယ်။ GTalk Boomber ကို version အသစ်အသစ်နဲ့ ဆက်ပြီး ကောင်းအောင်လုပ်သွားဖို့ အစီအစဉ်ရှိတာမို့ အမြဲတမ်း အဟောင်းဆွဲထားတဲ့သူတွေက အသစ်ကို ထပ်ထပ်ဆွဲဖို့တော့ လိုနေပါလိမ့်မယ်။ အခုတော့ စင်္ကာပူနဲ့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတော့ သုံးလို့ရပြီး မြန်မာပြည်ထဲမှာ စမ်းတော့ Proxy Address ထည့်ရတဲ့ internet user တွေ သုံးလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ Proxy Address ထည့်စရာမလိုတော့တဲ့ Bagan Server User တွေကတော့ အလွယ်တကူ သုံးလို့ရမယ်။ ဒါပေမယ့် အမြန်ဆုံး ပြင်ဆင်ရေးသွားဖို့ စီစဉ်နေတယ်။ သိတဲ့ တတ်တဲ့သူတွေလည်း လှမ်းပြီး အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ အိုင်တီမောင်မောင်က လုပ်ချင်တာပဲသိတာ၊ ကောင်းကောင်း ကန်းကန်း သိပ်တတ်တာတော့ မဟုတ်ဘူး။
သုံးတာကတော့ လွယ်ပါတယ်။ ကိုယ်ရဲ့ Gmail user name, Gmail password နဲ့ SignIn လုပ်။ ပြီးရင် ပေါ်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းအမည်တွေထဲက ပို့ချင်တဲ့သူတွေကို Select လိုက်လုပ်။ တကယ်လို့ အားလုံးကို ပို့ချင်တာဆိုရင် Select All ဆိုတာလေးကို ရွေး။ ပြီးရင် Next နှိတ်။ နောက်တစ်မျက်နှာမှာ ကိုယ် ရေးချင်တာတွေ ထည့်ရေး ပြီးရင် Send ဆိုတာ နှိတ်လိုက်ရုံပါပဲ။ လွယ်မှ သိပ်လွယ်။ ကဲ ဒီလောက်ဆို Gtalk Boomber လေးနဲ့ group message ပို့လို့ စမ်းလို့ ရမယ်ထင်ပါတယ်။ သုံးပြီးရင် အိုင်တီမောင်မောင်ကိုလည်း အကြံဥာဏ်လေးတွေ လှမ်းပေးကြပါဦးလို့ ပြောရင်း….။
သိပ်လွယ်လွန်းတဲ့ Print Screen Tool လေး (ScreenHunter) 31/1/2008 12:39:32 AM
ScreenHunter ဆိုတဲ့ အခမဲ့ ရတဲ့ software လေးဟာ အိုင်တီမောင်မောင် အတွက်တော့ Print Screen လုပ်ဖို့ အလွယ်ဆုံး Tool လေးတစ်ခု ဒါမှမဟုတ် အသုံးဝင်တဲ့ ပစ္စည်းလေးပေါ့။ သြ.. Print Screen ဆိုတာ သတိမပြုမိတဲ့သူတွေအတွက် နည်းနည်း ရှင်းပြပါရစေ။ သတိထားကြည့်ရင် Keyboard ပေါ်မှာပါတဲ့ PrtSc ဆိုတဲ့ Key လေးကို တွေ့ပါလိမ့်မယ်၊ အဲဒါလေးဟာ Print Screen လုပ်တဲ့ ခလုပ်လေးပါ။ Print Screen လုပ်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်ရဲ့ ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ မြင်နေရတဲ့ Screen ကို Capture လုပ်လိုက်တဲ့ သဘော၊ တနည်းအားဖြင့် Copy ကူးလိုက်တဲ့သဘောပေါ့။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ Microsoft Word, Paint, PhotoShop စတဲ့ application တွေထဲမှာ ပြန်ပြီး Paste (Ctrl+V) ချလိုက်တာနဲ့ အခုန ကူးလိုက်တဲ့ Screen ပုံက ပေါ်လာတယ်။ သိပ်ကိုလွယ်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူက Screen ကြီးတစ်ခုလုံးကို ကူးတာမို့ ကိုယ် မလိုချင်တာလဲ ပါ၊ လိုချင်တာလဲ ပါပေါ့။ အခုပြောမယ့် ScreenHunter ဆိုတဲ့ အခမဲ့ရတဲ့ Software လေးကတော့ ကိုယ်လိုချင်တာလေးပဲ ကွက်ပြီး ကူးနိုင်တာမို့ သိပ်ကို လွယ်သလို အသုံးလည်းဝင်၊ အခမဲ့လည်း ရတာမို့ သုံးစွဲနည်းနဲ့တကွ လက်တို့လိုက်ပါတယ်။
ScreenHunter5Free Version software ကို http://wisdom-soft.com/products/screenhunter_free.htm ဆိုတဲ့ အင်တာနက် လိပ်စာကနေ အခမဲ့ ဆွဲချနိုင်ပါတယ်။ ဖိုင်ပမာဏကလည်း 3.32 MB ပဲရှိသလို Install လုပ်ရတာလဲ ဘာမှ အခက်အခဲ မရှိပါဘူး။ ဆွဲချလို့ရတဲ့ Install exe ဖိုင်ကို Double Click လုပ်ပြီး Next ခလုတ်လေးတွေကို လေးကြိမ်လောက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ ကိုယ့်ကွန်ပျူတာထဲကို Install လုပ်ပြီး အသင့်သုံးနိုင်တဲ့ အနေအထားကို ရောက်ပါပြီ။ သုံးကြိမ်မြောက် မနှိတ်ခင် တွေ့ရတဲ့ Include the Wisdom-soft Toolbar (recommended). (You can remove later at any time.) ဆိုတဲ့ Check Box ကလေးကိုတော့ အမှန်ခြစ်လေး ဖြုတ်ပစ်ခဲ့တာ ကောင်းပါတယ်။
Install လုပ်ပြီး စမ်းသုံးကြည့်ဖို့ ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ အလွန်လွယ်ကူရိုးရှင်းတဲ့ Software Design ကို မြင်ရမှာပါ။ Capture Now ဆိုတဲ့ ခလုပ် ဒါမှမဟုတ် Short Cut အနေနဲ့ ကီးဘုတ်ပေါ်က F6 ခလုပ်ကို နှိပ်လိုက်တာနဲ့ စပြီး Screen Capture လုပ်ပါပြီ။ ဒီနေရာမှာလည်း Rectangular Area ဆိုတဲ့ Option ကို ရွေးခဲ့ရင် (ပုံမှန်အားဖြင့် ပုံသေရွေးထားပြီးသားပါ) Screen ပေါ်မှာ လေးထောင့် Cursor လေး ပေါ်လာပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ နေရာကို ကွက်ယူပြီး Capture လုပ်လိုက်ယုံပါပဲ။ ပုံသေအားဖြင့် သူက File အဖြစ်လည်း Desktop ပေါ်မှာ Save ပေးသလို Clipboard ပေါ်မှာလည်း သိမ်းပေးလိုက်တာမို့ ကြိုက်တဲ့ Application ကိုဖွင့်ပြီး Paste လုပ်ချင်ရင်လည်း အလွယ်တကူပါပဲ။
ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေ အနေနဲ့ To ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်ပြီး ဘယ်နေရာမှာ File အဖြစ် Save မယ်၊ ဘာဖိုင်အမျိုးအစားနဲ့ Save မယ်ဆိုတာတွေကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်လို့ရပါတယ်။
ScreenHunter ဟာ Print Screen လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Mouse ကိုပါ ထည့်မယ်၊ မထည့်ဘူး၊ Active ဖြစ်နေတဲ့ Application Window ကိုပဲ Print Screen လုပ်မယ်၊ ဒါမှမဟုတ် Screen ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲ Print လုပ်ချင်တယ် စသဖြင့် ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ပုံစံကို ကိုယ်ကြိုက်သလို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
Print Screen က ဘယ်နေရာတွေမှာ အသုံးတည့်လည်းဆိုတော့ ကိုယ် ကွန်ပျူတာမှာ ဘယ်လိုကြုံတွေလိုက်ရတယ် ဆိုတာကို မှတ်တမ်းတင်ထားချင်ရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ တစ်ဖက်သားကို ဓါတ်ပုံပို့ပြီး လှမ်းအသိပေးချင်တဲ့အခါမှာပဲဖြစ်ဖြစ် သုံးကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ Software Developer လောကမှာတော့ Error Page တွေ record လုပ်တဲ့အခါကအစ အများကြီးကြီး အသုံးတည့်တာပေါ့ ခင်ဗျာ။ ဒါကြောင့်မို့ အိုင်တီ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူတွေအနေနဲ့ စိတ်ဝင်စားစရာ Tool လေး တစ်ခုပါလို့ ပြောရင်း…။ (အိုင်တီမောင်မောင်)
Adobe ကလည်း Share BETA တဲ့၊ Free 1 GB တဲ့ 01/12/2007 6:19:25 PM
Web ပေါ်မှာ အပြိုင်အဆိုင် နေရာလု ဗိုလ်ကျနေတဲ့ Microsoft နဲ့ Google တို့ကို မသိမသာရော သိသိသာသာပါ ဈေးကွက် ၀င်လုနေတဲ့ Adobe က Share Beta ဆိုပြီး ဖိုင်တွေကို Online ပေါ်မှာတင် Share လုပ်ဖို့ စတင် မိတ်ဆက်လာပါတယ်။
ဘယ်က နည်းပညာတွေကို ဘယ်လိုဝယ်ပြီး ယှဉ်ပြိုင်နေတာကို မသိရပေမယ့် အခု မိတ်ဆက်လာတဲ့ Adobe ရဲ့ Share Beta ဟာ File Uploading နဲ့ Downloading တွေမှာ အလွန် လျှင်မြန်တဲ့ Speed တွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ပါတယ်။ အိုင်တီမောင်မောင် ကိုယ်တိုင် Upload လုပ်ကြည့်တဲ့ Speed အရတော့9Mb ရှိတဲ့ ဖိုင်တစ်ဖိုင်ကို တစ်မိနစ်ကျော်ကျော်နဲ့ Upload လုပ်သွားပါတယ်။
Web Application တစ်ခု ဖြစ်ပေမယ့် သုံးစွဲရတဲ့ ခလုပ်တွေ button တွေဟာ အလွန်ပဲ User Friendly ဖြစ်သလို Click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ရင်လည်း အဆင်ပြေပြေ အလုပ်တွေ လုပ်သွားပါတယ်။ ပြောချင်တာက Web ပေါ်မှာဆိုတော့ ဘာမှန်းမသိ Session Time Out ဖြစ်သွားတာတွေ ဘာတွေ မဖြစ်ပဲ Client Side Script တွေ Server Side Script တွေ အရမ်းကောင်းနေတဲ့ သဘောပေါ့။
ပထမဆုံး Adobe Share Beta ကို သုံးဖို့ http://share.adobe.com/ ကို ၀င်ပြီး Register လုပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း ကိုယ်ရဲ့ email, password, First Name, Last Name တွေ ပေးလိုက်ရင် Confirm mail တစ်စောင် ကိုယ်ရဲ့ email ထဲကို Adobe က ပြန်ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ဖွင့်ပြီး သူပေးထားတဲ့ Link အတိုင်း confirm လုပ်လိုက်တာနဲ့ စသုံးလို့ ရပါပြီ။
အခုအချိန်မှာတော့ Adobe က Share Beta လို့ ပြောထားပြီး 1G Free ပေးထားတော့ ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လောက်အထိ တိုးပေးလာမလဲဆိုတာ မသိပါဘူး။
သုံးစွဲပုံ သုံးစွဲနည်းကတော့ Login ၀င်ပြီးတာနဲ့ ကိုယ်ရဲ့ ကွန်ပျူတာထဲက Upload လုပ်ချင်တဲ့ File တွေကို Browse My Computer... ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေး နှိပ်ပြီး ရွေးခြယ် နိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင် ညာဘက်မှာရှိတဲ့ Share ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေး နှိပ်ပြီး Upload လုပ်လိုက်ရုံ ပါပဲ။ Upload မလုပ်ခင်မှာ Open Access နဲ့ Limited Access ဆိုပြီး ကိုယ်ရဲ့ ဖိုင်ကို လူတိုင်းကို Share လုပ်မလုပ် ရွေးခဲ့လို့ ရပါသေးတယ်။
Upload လုပ်ပြီးရင်တော့ ကိုယ် Share လုပ်ချင်တဲ့ သူဆီကို Share With ဆိုတဲ့ ခလုပ်လေး နှိပ်ပြီး ကိုယ် Share ပေးချင်တဲ့ သူရဲ့ eMail ဆီကို ပေးလို့ ရပြီပေါ့။
တော်တော်ကို ကောင်းပါတယ်။ အိုင်တီမောင်မောင်တော့ ကိုယ်တိုင် သုံးကြည့်ပြီး သဘောကျ လွန်းတာနဲ့ အားလုံးကို ပြန်ပြီး Share လုပ်လိုက်တာပါ။ Adobe Share နဲ့ ယှဉ်လိုက်တော့ အရင်တစ်ပတ်ကရေးတဲ့ ElephantDrive က မကောင်းတော့ပါဘူး။